Module fandrefesana maridrefy tokana-tokana, mpamokatra - mpamokatra Module fandrefesana mari-pana tsy mitongilana tokana
MSE Thermopile Infrared Temperature Scanner Module ho an'ny mari-pahaizana momba ny mari-pana amin'ny mari-pana
Ny modely infrared thermopile YY-MSE dia fampiharana fandrefesana mari-pana mifototra amin'ny sensor infrared tokana ultra-manify ambonin'ny tendrombohitra izay novolavolain'ny Sunshine. Mety amin'ny fandrefesana ny maripana amin'ny telefaona finday sy fitaovana marani-tsaina hafa.
Modely fandrefesana mari-pana amin'ny maridrefotra tokana MSC ampiasaina amin'ny fakantsary mari-pana amin'ny mari-pana
Ny modely fandrefesana mari-pana infrared tokana karazana MSC dia fampiharana fandrefesana mari-pana mifototra amin'ny sensor infrared-point tokana novolavolain'ny Sunshine Technologies. Izy io dia mety amin'ny fandrefesana mari-pana akaiky, izay afaka mamantatra ny maripanan'ny zavatra, ny mari-pana amin'ny velaran'ny vatana sns. Izy io dia manana ny mampiavaka ny tsy fifandraisana, ny valiny haingana ary ny fanovana angon-drakitra mety. Ny fomba fandrefesana ny mari-pana dia mitovy amin'ny thermometers amin'ny handrina.
Ny mari-pana momba ny mari-pana MSA tsy refesi-mandrefy Module sensor infrared thermopile ho an'ny rafitra fanaraha-maso
Ny modely fandrefesana mari-pana infrared tokana karazana MSA dia rindrambaiko fandrefesana mari-pana lavitra mifototra amin'ny sensor infrared-point tokana novolavolain'ny Sunshine Technologies. Ny module dia manana ny mampiavaka ny tsy fifandraisana, ny halavirana azo ovaina ary ny valiny haingana. Ny module dia manana fifandraisana fifandraisana tsotra, ny endriny mirafitra rafitra optika dia mahatonga azy ho mety amin'ny fandrefesana ny mari-pana lavitra. Ampiasaina be izy amin'ny fampiharana isan-karazany, toy ny fidirana amin'ny fidirana, ny fidirana amin'ny vavahady sns.